Dawladda Puntland oo wax ka badashay ammaanka magaalooyinka Puntland & maxkamadaha oo xukumay dambiilayaashii ka danbeeyey dilalkii qorshaysnaa. – Radio Daljir
Dawladda Puntland oo wax ka badashay ammaanka magaalooyinka Puntland & maxkamadaha oo xukumay dambiilayaashii ka danbeeyey dilalkii qorshaysnaa.
Garowe, Jan 28 ? Dawladda Puntland ayaa dhawrkii toddobaad ee ugu danbeeyey ku hawllanayd qorshayaal ballaaran oo wax badan looga baddalo amniga Puntland, gaar ahaan midka magaalooyinka waaweyn ee halbawlaha ah.
Ciidamada amniga ee ka hawlgali jiray magaalooyinka Puntland ayaa la kordhiyey dhawrkii toddobaad ee ugu danbeeyey, si ay qayb uga noqdaan tallaabooyinka dawladdu ku damacsan tahay xoojinta nabadgalyada.
Magaalooyinka Garoowe, Boosaaso iyo Galkacyo oo ahaa meelaha inta badan ay ka dhacaan falalka nabadgalyo xumo, laguna dilay wakhtiyo kala duwan madax ka tirsan golayaasha dawladda, ayaa la arkayey habeennadaan danbe ciidamada ammaanka oo gaaf-wareegayo gudaha iyo daafaha magaalada si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka.
Is-goosyada magaalooyinkaasi ayaa xilliga habeenkii ah waxaa ku sugan ciidamada ammaanka oo si lixaad leh u baarayey gaadiidka iyo dadka maraya waddooyinka, waxaana gaadiidka laga hubinayey agabka saaran iyo lambarrada baarbuurta lagu kala aqoonso ee taargada loo yaqaanno iyo sidoo kale sharciyan gobolka uu ka diiwaan gashan yahay.
Tallaabooyinkaan ku saabsan xoojinta amniga ee ay ciidanku wadaan ayaa si toos ah u socota maalin iyo habeenba, waxaana xilliyada danbe ee habeenkii ah ay ku soo gaaraan waddooyinka iyo daafaha magaalada si loo aqoonsado ama loo qabto dadka iyo gaadiidka saacadaha danbe ee habeenkii ah sida macno darrada ah u socda.
Hawlgalladaan xoojinta ammaanka ee ay ciidamadu ku hawllanaayeen toddobaaddadii ugu danbeeyey ayaa wax badan ka baddalay amniga deegaannada Puntland gaar ahaan midka magaalooyinka waaweyn oo hawlgallada ugu xooggani ay ka socdeen.
Qorshaan dawladdu ay ku xoojinayso amniga Puntland ayaa yimid kadib markii bilihii ugu danbeeyey deegaannada Puntland lagu dilay madax ka tirsan golayaasha dawladda, kuwaasi oo badankooda dadkii ka danbeeyey ciidamada amnigu ay ku guulaysteen soo qabashadooda.
Dhanka kale maalmihii ugu danbeeyey maxkamadda magaalada Boosaaso, waxaa la horgeeyey dhawr dhagar qabe oo ku eedaysnaa falal danbiyeedyadii ka dhacay Puntland gaar ahaan dilalka madax ka tirsanayd dawladda oo ay ka mid ahaayeen xildhibaanno ka tirsanaa golaha baarlamaanka Puntland iyo guddoomiyihii maxkamadda sare ee magaalada Boosaaso, kuwaasi oo dhammaantood maxkamaddu ku xukuntay dilal iyo xarig sanado dheer ah.